Ngwa kachasị mma ile ihe nkiri na usoro na Apple TV 4 | Esi m mac
Ọbịbịa nke ọgbọ nke anọ Apple TV ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na ọkara gara aga apụtawo ezigbo mgbanwe n'ụzọ anyị si ekiri telivishọn. Ọ bụ eziokwu na nke a adịlarịị ka ihe na-atọ ụtọ, mana ọ bụ eziokwu dị mfe, na ndị nwere ngwaọrụ a n'ụlọ ha, ma bụrụ ndị hụrụ ihe nkiri sịnịma, usoro telivishọn ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ, nwere ike ịkwado ya. Na nke a n'agbanyeghị na nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka ATresMedia, Mediaset, na ọbụna Amazon, ka na-eguzogide ime ihe ha kwesịrị ịmelarị: ịmalite ngwa ọdịnaya ha maka Apple TV.
Mana ka anyị ghara ịrafu onwe anyị, Apple TV 4, ya na sistemụ arụmọrụ tvOS ya, agaghị abụ ihe ọ bụla na-enweghị ọrụ siri ike nke ọtụtụ ndị mmepe, dịka, nyere omume enweghị nghọta nke otu dị ka ndị ahụ anyị kwuru na mbụ, Netflix ma ọ bụ HBO agaraghị enwe rutere n’ala anyị. Yabụ, isiokwu a abụghị maka Apple TV, kama banyere ngwa ndị ahụ, nke kachasị mma n'echiche m dị obi umeala, nke ị nwere ike ịnụ ụtọ narị narị, puku, fim, usoro na akwụkwọ akụkọ, na-echefu otu oge na ihe niile gbasara mgbasa ozi.
1 Star ngwa na-ekiri ihe nkiri na usoro na Apple TV
1.3 Usoro RTVE na Clan TV
1.4 Inye na Plex
Star ngwa na-ekiri ihe nkiri na usoro na Apple TV
M na-atụ anya na Ezubere post a maka ndị na-agụ akwụkwọ na-ahụ ihe nkiri na / ma ọ bụ usoro telivishọn. Na Apple TV 4 enwere ọtụtụ ngwa nke ụdị niile, mana taa anyị na-elekwasị anya na ọdịnaya nke ọdịyo.
Achọrọ m ịtụ anya na ụfọdụ n'ime ngwa ndị na-esonụ ga-apụta ìhè nye ọtụtụ n'ime gị, mana n'ihi na ha doro anya, ha nọ ebe a. Anyi ka anyi bido? Oh, ma ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ budata ihe nkiri efu, gaa na njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Ọfọn, ee, na nke mbụ, anyị na-etinye ihe doro anya, ngwa ahụ Netflix maka Apple TV, ngwa nke puru iche na uzo abuo:
Qualitydị dị ukwuu, ọtụtụ na ọdịnaya dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na enwere mgbe niile ihe nkiri na ọ ga-aka mma ichefu.
Ọmarịcha njirimara ya yana ndenye logarithm ya.
Na Netflix ị nwere ike ịmepụta profaịlụ onye ọrụ ọtụtụ, otu maka ezinụlọ ọ bụla, yana sistemụ ahụ ga-amata ihe masịrị gị site n'igosi gị ihe nkiri, usoro na akwụkwọ akụkọ dabara na ọdịmma ha. Yabụ, ngalaba "Ndepụta m" na-eto ngwa ngwa karịa ka ị nwere ike iri, ka oge na-aga, ọ na-amụtakwu, na-edobe ya karịa.
Daredevil, Narcos, oflọ Kaadị, Santa Clarita's Diet na ọtụtụ narị utu aha ndị ọzọ bụ ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị ga-akụ gị n'uche.
Anyị enweghị ike ileghara ngwa ahụ anya HBO maka Apple TV Kaosinadị, Ọ bụ akụkụ nke nhọrọ a karịa maka ogo nke ọdịnaya ya karịa maka ogo nke ngwa ahụ n'onwe ya. Westworld, Pope na-eto eto, Waya, Silicon Valley, Egwuregwu nke n'ocheeze, Exorcist, Tabboo, wdg, ha na-egosi ogo nke ọdịnaya HBO, dị ka mgbe niile, ewepu, agbanyeghị, njirimara onye ọrụ ya na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ: ịnweghị ike ịmepụta profaịlụ onye ọrụ, ịnweghị ike ịgbakwunye usoro na ndepụta gị mana isi nke ọ bụla, na nke N'ezie, ọ bụghị dị ka "smart" dị ka Netflix.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ị hụrụ fim na usoro n'anya n'anya, HBO enweghị ike ịnọ.
Usoro RTVE na Clan TV
Anyị ahụla ọrụ TV abụọ na-asọpụta na, dị ka anyị niile mara, na-akwụ ụgwọ; agbanyeghị, onyinye ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị, buru ibu. M tinyere ngwa ọdịnala n'otu ogbe Usoro RTVE, nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ usoro n'usoro ya niile, na enweghị mgbasa ozi na telivishọn ọha na eze na Spanish, na Egwuregwu TV, ngwa yiri ya ma ejiri ọdịnaya ụmụaka na kwa na Bekee ka ụmụntakịrị nwee ike ịmụ asụsụ a.
Ha abụọ bụ n'efu ma ị nwere ike ibudata ha ozugbo na Storelọ Ahịa Ngwa nke Apple TV gị, ha nwekwara ụdị nke iOS.
Inye na Plex
Ọ bụrụ na-amasị gị nwere fim, usoro, akwụkwọ, ebudatara omume gị Mac ma ọ bụ na mpụga ike mbanye, na Inye ma ọ bụ na Plex ị pụrụ ịnụ ụtọ a niile ọdịnaya na Apple TV 4 na-enweghị iji airplay site na iOS ngwaọrụ.
Agaghị m abanye na nkọwa gbasara nke ọ bụla dịka ọ ga-abụ ntụnyere bara ụba, agbanyeghị, ana m agba gị ume ka i lezie anya nke ọma ma họrọ nke kacha mma maka ọdịmma gị. M hapụrụ gị njikọ nke abụọ.
Plex: TV na ihe nkiri na -enubafree
Ugba Ọ bụ ihe dị egwu ngwa m ga-echekwa ya maka ikpeazụ. You nwere ike iche na inwe ike lee ọdịnaya niile ekesara na ibe dịka HDFull, Pordede, Series Dando, wdg. na Apple TV gị? Ya mere ekwula okwu ọzọ. N'ezie, VidLib bụ ọrụ, agbanyeghị na amaara m na onye nrụpụta ya na-arụ ọrụ na ahụmịhe onye ọrụ ga-eju anyị anya.
VidLib bụ ọba akwụkwọ vidio nke onwe gị.
Ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọwa vidiyo na-achọ na Spanish nke obodo agbakwunyere. Mana ihe kachasị mma bụ na ịnwere ike ịgbakwunye ọwa vidiyo gị n'onwe gị ma mepụta ọbá akwụkwọ gị.
Usoro anyị ga-achọ ma wepụ, site na weebụsaịtị ị gosipụtara, ndekọ vidiyo na njikọ ya. Ọ bụrụ na ịchọta ya, ịnwere ike ịgbakwunye web dị ka ọwa na ndepụta gị. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike, n'ihi na algorithm adịghị akwado weebụsaịtị ahụ, echegbula, ị nwere ike izipu adreesị weebụ na igbe ntụnye anyị site na ngwa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Ngwa kachasị mma ile ihe nkiri na usoro na Apple TV 4
Rodrigo kwuru dijo
Na crackle na mubi?
Zaghachi Rodrigo Camacho
Dika ule mbu, LG Ultrafine 5K monitors adighi enye nsogbu na router